Muxuu ka yiri Klopp finalka Champions League ee caawa ay ku wajahayaan Real Madrid? – Gool FM
(Paris) 28 Maajo 2022.Tababaraha reer Jarmal ee Jurgen Klopp ayaa ka hadlay shirkiisa jaraa’id ee ka horeeyay finalka Champions League ee caawa oo Sabti ah la ciyaari doono.
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo ka soo muuqday shir jaraa’id ayaa kahor ciyaarta caawa, wuxuu ka hadlay xaallado badan, wuxuuna yiri:
“Ma garanayo sida aan dareemi doono haddii aan badino.”
“Kaliya waxaan ka fikirayaa inaan u diyaargaroobo kulanka, ma iibsan karno khibrada Real Madrid, qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxdaas ayaa ku guuleystay afar koob oo Champions League ah, tababaraha ayaana sidaas oo kale sameeyay.”
Xiddiga kooxda Liverpool ee Mohamed salah ayaa shiday jawiga in muddo ah sababtuna waxa ay ahayd hadaladii uu sheegay ee ku saabsanaa in uu doonayo in uu ka aarguto guuldaradii Real Madrid ee finalka champions League 2018.
Klopp oo arintaas ka hadlaya ayuu Klopp yidhi:
“Salah, waxay u ahayd arrin muhiim ah, wuu dhaawacmay oo ka baxay finalka, aniguna waan fahmay waxa uu kala jeedo hadalladan.”
“Aargoosi kaliya ma ahan waxa na dhaqaajinaya, daawashada muuqaal kulankaas waxba iguma soo kordhineyso, waayo waxyaabo badan ayaa ka dhacay kulankaas, sida qaladkii goolhayaha iyo dhaawaca Salah.”
“Taariikhda waxa ay sheegeysaa in Real Madrid ay tahay kooxda ugu cadcad ku guuleysiga tartanka, in kasta oo aan wax dan ah ka lahayn arrintaas, haddii aan ku ciyaarno heerkeena waxaan si wanaagsan ula tartami karnaa berry.”